uthando Sweet, izingane nje kuphela kodwa futhi abadala. Nokho, lokho akusho njalo isikhathi ukupheka intandokazi uswidi. Oreshnitsa Electric angakusiza ngesikhathi esifushane ukubhaka ikhukhi omkhulu, sekuyisikhathi eside eyathandwa.
kudivayisi Kwethulwa odingeka, njengoba unezimfanelo eziningi ezinhle:
- bhisikidi okuphekiwe ngokushesha kakhulu, kuyilapho ungenayo ukuba njalo ukulandela ukuma inhlama is hhayi wokushiswa;
- kukhona kungenzeka zokulungisa lokushisa Ukushisa zedivayisi;
- Idivayisi ifakwe izindlela ezidingekayo isivikelo okweqile nelezifunda iDemo;
- Oreshnitsa kagesi kunikeza ithuba amagobolondo ngaphezulu 20 pass eyodwa;
- idivayisi wenza elinama ephephile;
- Idivayisi ifakwe izinkomba ekuzimiseleni namandla;
- Isethulo zedivayisi kuyinto ergonomic kakhulu, okungezona ukushelela phezu kwetafula, labe Ubuye usayizi encane;
- sibonga Ilokhi eyengeziwe on the lid, ungaqiniseka ukuthi ngeke ngephutha;
- Idivayisi Kulula ukuhlanza, has a eziphansi futhi sisebenzisa ugesi kancane.
Ngomqondo onabile, ayikho imithetho ethize ku ukusetshenziswa kule divayisi alikho. Ngokwemvelo, ngesikhathi ukusebenza, kuyinto efiselekayo ukugcina siphephe. Electric Oreshnitsa siyasebenza kakhulu futhi iphephile. Nokho, ukuzama ukugcina ikhodi yamandla asisho uthinte Ukushisa ezisekelweni.
Ukuze umsebenzi udinga ukuhlolwa ezifanele. Ngaphakathi idivayisi selibekiwe ngokucophelela. Okulandelayo, udinga kuphela ukuhlela isimo yokusebenza izinga lokushisa oyifunayo. Manje ungakwazi ungakhathazeki futhi buthule hambahamba ibhizinisi labo. Ngemva kwesikhathi isethi Oreshnitsa amaza kagesi ukulungela kwamakhukhi. Awunayo okufanele ukhathazeke ngakho ukuthi khekhe uyozishisa.
Indlela ukukhetha idivayisi kwesokudla?
Ngaphambi besifazane abaningi abafuna ukuthenga lo mshini, manje noma ngokuhamba kwesikhathi kuphakama umbuzo ngokuqondene nokuthi imiphi imodeli kufanele ayethanda? Uma udinga i Oreshnitsa kagesi, amanye amakhasimende kuzokusiza hhayi ukuba iphutha ngokuthenga. Nokho, kunezinye ongakhetha okufanele zilandelwe ngesikhathi Ukukhetha.
Ngokwesibonelo, sinake izinto ukwakhiwa komkhiqizo. Kumelwe ibe ephilile, ephephile futhi amelana nokushisa. I zingenzeki kakhulu futhi isikhathi esifushane kuyinto plastic. Kulesi sigaba futhi anqume uhlobo ifomu enamathela. Ngokuvamile emizi uncamela surface non stick.
Idivayisi kumele ibe belondekile ngangokunokwenzeka. Okusho ukuthi, akufanele sembule ukukhubazeka, okungaholela kokunqotshwa wamanje womuntu. Zonke nabalawuli kufanele isebenze kahle. Kuyinto efiselekayo ukuthi isibambo idivayisi thermally ngci, ngakho ngeke bashe.
Udinga ukuba banake inombolo kude. It zokhahlamba kusuka izingcezu 6 kuya ku-24. It kuncike futhi izindleko umkhiqizo. Phakathi Ukukhetha kufanele inake amandla nokusebenza ovensWaffle. Ukuze ikhaya zisebenzisa ngokwanele 700-1000 Watts.
Quality waffle kagesi yensimbi "Oreshnitsa" kufanele abe isivivinyo ugqoko isivuno sisiningi kakhulu khona, thermostat onesici, eliqinile le ukukhiya indlela kwekhava isikhundla avaliwe. Inzuzo eyengeziwe kungaba gumbi isitoreji se-intambo. Yilokho zonke izici ukukhetha. Ngikufisela inhlahla!